Akwụkwọ ahịhịa akpa, Okwuchi Akpa, Akwụkwọ akpa - Changlin
Fish Nlereanya RPET 100% Recycled Ihe Igbe ...
Ozuzo RPET akpa 100% recycled Ihe Pock ...
Waffle ụkpụrụ RPET Bag inogide etemeete akpa Natu ...
Eco Ike Ndụ Time Omenala anọte Aka Kwadobe Z ...
Tyvek Akwụkwọ Bag Inogide keosarsị mkpọchi uwe mmechi ...
Inogide washable kraft akwụkwọ mkpọchi uwe mmechi Mak ...
Painiapulu Fabric akpa mmetọ Free Natural Cos ...
Mee elu akpa Eco-enyi na enyi Clear TPU Holographic ...
Eco-enyi na enyi degradable iridescent TPU ịchọ mma ...
Natural Akwụkwọ ahịhịa akpa Eco-enyi na enyi ịchọ mma O ...
Eco-enyi na enyi ịchọ mma Bag Ọhazi zipa Pouc ...
Akwụkwọ Straw obere akpa Eco-enyi na enyi Natural Agba Ma ...
National Cotton Kanvas Bag Travel makeup makeup ...
Natural onwunwu Fabric Bag ịchọ mma Ọhazi Mak ...
Natural Cotton Bag Casual Inogide Bag emefu GR ...
Nwee ọtụtụ akụrụngwa teknụzụ dị elu
Ahụmahụ mmebe otu na ihe karịrị 150 ọkà ọrụ
Isi usoro mmepụta abụọ nwere ikike kwa ọnwa nke akpa nde 1
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) makwaara dị ka coke kalama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwa.
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) makwaara dị ka coke kalama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwa. Ọ bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mepụtara site na iji obere yarị PET ejiri. Ebube carbon ya emeela echiche ọhụrụ na mpaghara imu ya. Dị ka nyocha si gosipụta, ọ nwere ike ịchekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80 ...
China kwupụtara 'agha' na mmetọ plastik
China na-agbasi mbọ ike belata ojiji nke ngwaahịa plastik na-abụghị nke na-emebi emebi site na imelite iwu ụlọ ọrụ plastik, afọ iri na abụọ mgbe ebidochara mmachi na akpa rọba. Ndi mmadu mara banyere mmetọ plastik abawanyewo na afọ ndị na-adịbeghị anya, na Chi ...
Jiafeng Company: Ngwa RPET ga-abụ omume nke mmepe mmepe nke ihe n'ọdịnihu.
Ugbu a ọ dị oke mkpa iji kpuchido gburugburu ebe obibi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọpụta mkpa ọ dị ịmegharị mmekọrịta enyi na isonye na RPET ma nye onyinye na nchekwa gburugburu ebe obibi. ..
Na Ọgọstụ, 2020, na isi ụzọ ụkwụ na-agafe agafe nke Qingdao North Railway Station, e debere ọtụtụ nche anwụ pụrụ iche, bụ nke e bipụtara ihe ndị nwere njirimara Qingdao dị ka ịgba, mmiri seagull na ije. Ihe kacha dị ịrịba ama bụ okwu ndị a bụ “Ebuola m karama rọba ...
ỌR AD TR T ỌREC
Advanced oru akụrụngwa
Ihe gburugburu ebe obibi
Iru mmepe na-adigide
Nye ngwaahịa na ọrụ kachasị mma